okokufundisa BINANCE - Amathiphu namasu ku Binance
Ukuthenga, ukuthengisa, ukuvikela noma ukugcina ama-cryptocurrensets akho kuba ukudlala kwengane ngokushintshana Binance. Thola isifundo esiphelele, iseluleko sobuchwepheshe, izindaba Binance ikhadi elisebenziseka nabo bonke abathengisi kanye ne-BNB crypto kanye nohlelo lwayo lokubuyisa imali olufinyelela ku-8%.
Bhalisa ku Binance okokufundisa
Ukushintshaniswa n ° 1 emhlabeni.
Binance yinkampani efakwe ohlwini olungaphezulu kwe- $ XNUMX billion. Njenganoma yikuphi ukushintshaniswa, kukuvumela ukuthi ushintshe ama-cryptocurrensets ngokuqhathanisa namanye ama-cryptocurrensets (i-bitcoin, i-ethereum, i-tether ...) noma izimali ze-fiat ezifana ne-euro noma idola.
Abasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-15
Unyaka ngamunye, abasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-15 bathenga futhi bashintshisane cishe ama- $ 2 billion ku-Cryptocurrency on Binance.
Ikhadi lasebhange le-Visa
ne I-Visa Binance, ungaguqula futhi usebenzise ama-cryptocurrensets akho owathandayo ezitolo ezingaphezu kwezigidi ezingama-60 namabhizinisi emhlabeni jikelele.
Inzalo ngenkathi kulondolozwa
Beka futhi ugcine i-cryptocurrency yakho. Ngenkathi uthola inzalo, uyakwazi ukuhoxa noma ukuhwebelana nganoma yisiphi isikhathi.
Ama-cryptocurrensets angama-600 atholakalayo.
Umthamo wokuhweba wansuku zonke wama- $ 2 billion.
Thenga uthengise ama-cryptos ngemizuzu elandelayo Binance. Joyina ipulatifomu yokushintshisana nge-crypto enkulu kunazo zonke emhlabeni. Thola ingxenye ye-ecosystem Binance nama-cryptos ayo ahambisanayo.
Kutholakala kuselula (i-Android ne-IOS)
Kutholakala ku-inthanethi kukhompyutha
Ungayibhalisa kanjani futhi uyivule kanjani i-akhawunti ku- Binance ?
Bhalisa ku Binance
Qala ukubhalisa ngokulandela izinyathelo ezahlukene. Bese uye ebhokisini lakho leposi ukuze uqinisekise i-imeyili ethunyelwe kuwe Binance. Chofoza kusixhumanisi esikuqukethe ukuqinisekisa ikheli lakho le-imeyili, elizokuvumela ukuthi wenze i-akhawunti yakho isebenze.
Uma usubuyile Binance, chofoza kusixhumanisi "Ngena Ngemvume".
Ngincoma ukuthi uye ku-URL: https://www.binance.com/fr/my/settings/profile. Leli khasi lizokuvumela ukuthi uqale ukuvikela i-akhawunti yakho.
Ungayivikela kanjani i-akhawunti yakho nesikhwama semali ku Binance (1/3)?
Manje sizovikela i-akhawunti yakho ukuvimbela noma yikuphi ukugqekeza. Ukuze wenze lokhu, iya kule URL: https://www.binance.com/fr/my/security
Kunconywa amazinga amaningana okuphepha njengokuqinisekiswa kwe-Google okuhambisana nokuqinisekiswa kwe-imeyili. Lapho nje weqa ama-euro angamakhulu amaningana ku-crypto, ngikweluleka ukuthi uthole ileja eyengeziwe efana ne-YubiKey.
Ukufakazela ubuqiniso kwe-Google.
Lolu uhlelo lokusebenza lweselula lwamahhala olukuvumela ukuthi ukhiqize ikhodi yokuqalisa njalo ngemizuzwana engama-30. Ngiyincoma kakhulu.
Le i-imeyili ethunyelwe ngu Binance yakhiwe ngamadijithi ayisithupha. Ekuthengisweni ngakunye, uzodinga ukufaka le khodi. Ngakolunye uhlangothi, angikukhuthazi ukuqinisekiswa kwe-Google okuhambisana ne-SMS, kunalokho khetha i-imeyili.
Ungayivikela kanjani i-akhawunti yakho nge-KYC ye Binance (2/3)?
Ukuze usebenzise ngokugcwele izinsizakalo Binance futhi uphakamise imikhawulo, kuzofanela uqinisekise i-KYC yakho (Yazi Ikhasimende Lakho). Uzokwazi ukwamukela nokuhoxisa amanani amakhulu, oda i-Visa yakho ye-CB Binance, finyelela ukuhweba kweLaunchpad neFuture.
Ukuze wenze lokhu chofoza ku- Ukuqinisekiswa kobunikazi. Le inqubo eyizinyathelo ezimbili. Ugcwalisa izinkambu ezidingekayo bese uthumela okukodwa kokunamathiselwe okuceliwe (umazisi onamacala amabili, noma ipasipoti, noma ilayisense yokushayela.)
Careful️ Qaphela, babheka usuku lokuphelelwa yisikhathi, ikhwalithi yesithombe, nazo zonke izinombolo uma zikhonjwa. Uma kukhona ukwenqatshwa, akusho ukuthi bakutshele ukuthi kungani, kepha ngisanda kukucaphuna.
Ukuhlola ubuso kuvuliwe Binance
Vikela i-akhawunti yakho ngokubonakala kobuso (3/3).
Lesi yisinyathelo sokugcina. Kusuka kwikhamera yakho yewebhu, ikhompyutha noma ifoni, kuzofanela ulandele izinkomba. Khumula isigqoko, izibuko, njll. Ubuso bakho kufanele bubekwe ngaphambili embuthanweni onikezwe le njongo. Bangakucela ukuthi ucwayize, ujikeleze ikhanda lakho, ubheke kwesokudla nakwesobunxele ...
Uzothola impendulo noma ngabe isinyathelo siphumelele noma cha. Uma kunjalo, kuzofanele yenziwe kabusha ize iqinisekiswe.
Thenga i-crypto Binance
Ungathenga kanjani ama-cryptos ku- Binance nekhadi lakhe lasebhange?
Uma ufuna ukutshala imali ngakho-ke thenga ama-cryptocurrensets ku Binance kusuka ekhadini lasebhange (i-visa, i-mastercard), chofoza kuthebhu ethi "Thenga ama-cryptos, bese kuba yibhange / ikhadi lasebhange".
Khombisa inani nge-euro kokuthengiselana okufunwayo
Khombisa i-cryptocurrency ofisa ukuyithola. Ngokuzenzakalelayo, ngikweluleka ukuthi uthenge USDT. UkusukaUSDT, ungathenga noma yiluphi olunye uhlobo lwe-idijithali yemali. Binance izokunikeza uhlu oluzenzakalelayo kufaka phakathi i-bitcoin (BTC). Ngakho-ke uma ufuna ukuthenga i-Bitcoin, khetha i-Bitcoin.
Khetha kwakho Ikhadi lasebhange noma ikhadi elisha, lapho-ke ukuthenga.
Ungayithenga kanjani i-Litecoin LTC ku- Binance ?
I-Litecoin (LTC) iyi-cryptocurrency engaphansi kokuhluka kwentengo, ngokungafani nama-stablecoins afana USDT, BUSD, USDC, DAI ... IneBlockchain yayo: Litecoin. Ukuthengiselana kwayo kuyashesha, kuvikelekile futhi kushibhile kakhulu.
Iya ekhasini Thenga ama-Cryptos> Ikhadi Lesikweletu / Ledebhithi
Sesha i-Litecoin crypto - LTC
Ungakhethi noma yini enye bese uchofoza okuthi Qhubeka.
Ungathenga kanjani ama-cryptos ku- Binance Ukudlisa imali ngebhange ?
Uma ufuna ukuthola ama-cryptocurrensets ku Binance kusuka ekudlulisweni kwebhange (sepa), chofoza kuthebhu ethi "Thenga ama-cryptos, bese ufaka idiphozi yaseBhange".
Qiniseka ukuthi ungene Ukudluliswa kwe-SEPA
Khombisa imali ofisa ukuyifaka Binance, bese uqhafaza Qhubeka.
Landela inqubo... Binance bazobe sebekunikeza imininingwane yabo yasebhange.
Kulokho Binance ayisatholakali ngaphakathi kwe-European Union, kulandela iBrexit, ngikweluleka ngokuqinile ukuthi uye kwikhawunta yebhange lakho noma ushayele umnikazi wakho imali ukuze akwazi ukufaka imali Futhi ikakhulukazi kungenzeka irekhodi Binance njengomzuzi omusha ngokwenziwayo kwakho okulandelayo.
Lithini ikheli lami le-crypto USDT, I-BTC, i-ETH ... ivuliwe Binance ?
Uma ufuna ukwazi amakheli akho wediphozi ama-cryptocurrensets akho ahlukile, landela le miyalo!
Iya ku-Portfolio> Spot Portfolio
Enkambeni ethi "Thola ifa", bonisa isibonelo USDT.
Ngezansi kwekhasi, uzothola itafula elethula le mpahla.
Bheka ngakwesokudla, kukholomu yesenzo. Uzothola izixhumanisi. Chofoza ku- "Idiphozithi".
Ngaphansi kwekhodi ye-QR, uzothola uchungechunge lwezinhlamvu. Leli ikheli lakho le-idijithali yemali ngohlobo lwemali oluseshwe.
Amathiphu namasu Binance
Ungaguqula kanjani i-EUR ngokushesha USDT noma i-BUSD ivuliwe Binance ?
Ngokuzenzakalelayo, Binance ayikunikezeli ngababili be-EUR_USDT endaweni yokuhweba. Kepha qaphela ukuthi i-URL ikhona nokuthi ukuguqulwa kungenzeka.
Okwababili be-EUR_USDT : https://www.binance.com/fr/trade/EUR_USDT
Okokubili kwe-EUR_BUSD: https://www.binance.com/fr/trade/EUR_BUSD
Manje sesizothengisa ama-euro akhe nge USDT ngokufaka i-oda ku- "Market".
Ngaphezulu kwenkinobho "Thengisa i-EUR", unohlu lokuhambisa. Ngokuyihambisa ngakwesokudla, ukhombisa inani lama-euro ofuna ukuwathengisa ngokuya ngesitoko sakho esiphelele.
Chofoza inkinobho "Thengisa i-EUR". Kuzonikezwa i-oda bese uzobe usuthola USDT.
Buyela emuva ku-Wallet> Spot Wallet. Kubhalansi yakho ye-Crypto, thola umugqa USDT, kufanele ube nenombolo ye-USDT eceliwe.
Amazwana ukuthenga noma uthengise ama-Cryptos ngomkhawulo?
On Binance, kungenzeka ukuthenga i-Cryptocurrency ngenani olifunayo, kusadingeka ukuthi ifike ngentengo oyishilo nokuthi kunevolumu eyanele yokushintshanisa ukwenza lokhu kuthenga.
Masithathe isibonelo kule url: https://www.binance.com/fr/trade/THETA_USDT
Manje sizothenga iTHETA nge USDT ngentengo oyifunayo.
Ku- "Inani", bonisa inani ku- USDT ukuthi uzimisele ukuthenga ukuze uthole u-1 THETA. Lapha intengo ingu-0,6029. Uma ufuna kushibhile, faka isibonelo u-0,5.
Ngesikhombisi, bonisa ngaphansi kwenkambu "Inani" inombolo yeTHETA ofisa ukuyithola ngokuyalela kwakhoUSDT. Kulesi sibonelo indawo yami ebekiwe ingu-0,5076 USDT.
Inkambu ethi "Ingqikithi" ikhombisa inombolo ye-USDT ozochitha.
Chofoza ku-Thenga i-THETA.
Lapho usuqinisekisile, i-oda lokuthenga lizokwenziwa isikhathi esingapheli uma nje amapharamitha wokuthenga enganele. Ungakhansela i-oda lakho nganoma yisiphi isikhathi: https://www.binance.com/fr/.../openorder
Order️ I-Limit oda lakho alibekiwe?
Lokhu kungabangelwa yisikhathi eside kakhulu sesinqumo ⏱. Qalisa kabusha ikhasi, bese ufaka isikhombisi esingaphansi kuka-95%.
Amazwana ukudayiswa noma uthenga ama-Cryptos nge-oda le-OCO?
On Binance kuphela, ungadala ama-oda e-OCO (One-Cancels-the-Other). Ngakho-ke, ungathenga i-idijithali yemali ngamanani amabili ahlukene, ngokwesibonelo lapho yephula ukumelana noma lapho ithinta ukuxhaswa.
Ngokwami, ngenza ama-OCO oda ikakhulukazi athengiswayo. Kulesi simo esithile, kucatshangwa ukuthi usuvele unayo i-cryptocurrency oyifunayo yokwenza i-OCO yokuthengisa oda. Uma kungenjalo, sicela uthenge i-crypto yakho nge-Limit noma i-oda le-Market. Ngakho-ke uzokwazi ukubeka inzuzo yakho yeThatha kanye nokulahleka kwakho kwe-Stop ngendlela efanayo. Uma eyodwa yalezi ezimbili icushiwe, enye izosuswa.
Ungalifaka kanjani i-oda le-OCO ku- Binance ?
Iya ukubeka i-oda, khetha ukuthengisa bese u-OCO kuthebhu yomkhawulo wokuma.
Gcwalisa izinkambu ezi-4: intengo / ukuma / umkhawulo / inani:
- inkambu yamanani: ikuvumela ukuthi uthengisele kulitshe
- inkambu ye-Stop: ivumela ukwenziwa kwe-stoploss
- inkambu ye-Limit: lena yintengo yokuthengisa ye-stoploss (intengo yokuqedwa)
- inkambu ye-Amount: leli inani kwi-crypto ofuna ukuyithengisa
Ekugcineni, chofoza inkinobho Thengisa ukubeka i-OCO oda
Qaphelisisa, inkambu ye-Stop kumele ihlale inkulu kunenkambu ye-Limit
Ulisebenzisa kanjani ikhadi lakho le-Visa Binance ?
ne I-Visa Binance, ungaguqula futhi usebenzise ama-cryptos akho owathandayo ezitolo nakumabhizinisi emhlabeni jikelele. Konke okudingeka ukwenze ukudlulisa ama-cryptocurrensets akho esikhwameni sekhadi lakho Binance.
Xhumana ne-ejenti yomeluleki Binance
Kunguqulo yewebhu, chofoza ibhamuza lengxoxo ngezansi kwesokudla sesikrini sakho noma kokuthi "Usizo Lwe-inthanethi" ngohlelo lokusebenza lwedeskithophu. Kuhlelo lokusebenza lweselula, iya kuphrofayela yakho (phezulu kwesokunxele) bese ukhetha Usizo Nosizo bese ekugcineni Xoxa.
Inqubo yokusebenzisa i-livechat kanye nokuxhumana ne-ejenti:
Khetha isigaba esihambisana nenkinga yakho noma leso esisondela eduze kwaso
Cacisa ukuthi inkinga yakho ayixazululeki ngokuchofoza isithupha phansi
Thepha okuthi phuma uma ubona imibuzo eminingi engafani nenkinga yakho.
Shiya umlayezo ochaza inkinga yakho, uzothunyelwa ukusekela, asikho isidingo se-SPAM, umlayezo owodwa wanele!